धुर्मुस-सुन्तलीको विरोध गर्नुअघि एकपटक ऐनामा आफूलाई हेर्ने कि ? | NewsSudur
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको घोषणा भएसँगै अनेकौं तर्कवितर्क सुरु भएको छ ।
समाजिक संजालमा त्यसमध्ये केहि व्यक्तिहरु धुर्मुस-सुन्तलीलाई सिकाइरहेका पनि छन् । उनीहरु भन्दैछन् कि स्टेडियम हैन, एक सय रुपैयाँमा उपचार हुने अस्पताल खोल्नुस् भनेर ।
कोही भन्दैछन् कि साउदी कतारमा दुःख गरेर कमाको पैसा न दिनु बरु अरु के जाति संघसंस्थालाई दिने रे ! एउटा देश विकास हुनलाई त्यो देशको सरकारभन्दा हरेक नागरिक धेरै जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने यहाँनेर महत्वपूर्ण छ । काम नभएर ‘टाइम पास’को लागि फेसबुक चलाउनेहरुले धुर्मुस-सुन्तलीलाई सुझाव दिँदै छन् ।
यो जोडीले जनविश्वासलाई पूरा गर्दै केही काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरुले देशको करोडौं जनताको माया र साथ पाएका छन् । त्यो यत्तिकै हैन । उनीहरुले काम गरेर समाजलाई देखाइसकेका छन् ।
राजनीतिक नेताहरुले अस्पताल बनाइदिन्छु भन्छन् । अरु के के बनाइदिन्छु भन्छन् तर काम गरेझै लाग्दैन। काम नगरे पनि हामी हाम्रा नेताका लागि निरन्तर ताली पिट्दै आइरहेका छौं । तिनै जनता सामाजिक कार्यहरु सफलतापूर्वक गरिसकेका यो जोडीले क्रिकेट स्टेडियम बनाउँछौं भन्दा विभिन्न प्रकारले आक्रमण गरिरहेका छन्
धन्य छन् मेरा देशका जनता, जो चोकमा बसेर एक कप चियाको भरमा देश विकासको कुरा हाँक्छन् । अनि राजनीतिलाई गाली गर्छन् । हाम्रो देश विकास न हुनुमा नेताहरु हैन हामी जनता सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छौं । किनकी, हामी उनीहरुको औंलाको ईशारामा नाँचिरहेका छौं । जनताको लागि भनेको छ, आन्दोलन घोषणा नेताले गर्छन् । आन्दोलन हुन्छ तर त्यसको दुःख कसले भोग्नु परेको छ ? प्रहरीको डण्डा खाने पनि नागरिक नै हुन्छन् । दिन भरी काम गरेर दुई छाक खानेले त्यो रात भोकै सुत्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि आम नागरिक नै हुन्छ ।
अनि आन्दोलन घोषणा गरेका ठूला नेताहरु सडकमा उत्रिएका छन् आजसम्म ? विद्यार्थीको नाममा सडकमा उत्रियो, गरिखाने जनतालाई दुःख दियो अनि देश विकास भएन भन्यो । आलोचना गरिरह्यो । त्यसैले देश विकासतर्फ उन्मुख नहुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो देशको युवावर्ग र विद्यार्थीहरु हुन् । अनि हामी जनता ।
धुर्मुस-सुन्तलीले बनाउन लागेको क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको विरुद्धमा हुनुभएको महानुभावहरुलाई मेरा केही प्रश्नहरु-
१. धुर्मुस-सुन्तलीले तपाईंहरुले साउदी कतारमा दुःख गरेर कमाएको पैसा सहयोग गर्नैपर्छ भनेर कसले भनेको छ ? अनि दुःख भन्ने साउदी कतारमा बस्नेले मात्र गरेका छैनन् ।
२. तपाईंको इच्छा छैन भने नगर्नुस् सहयोग तर अरुलाई पनि सहयोग नगर्नुस्, चन्दा न दिनुस् भनेर मान्छे भड्काउने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो ?
३. मानिसको आधारभूत आवश्यकता भनेको गाँस, बास र कपास भनिन्छ र त्यो भूकम्पपश्चात् अनेकौं बस्तीहरु बनाएर धुर्मुस सुन्तलीले नै कयौं मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यो काम चाहिँ यिनीहरुको थियो कि नेपाल सरकारको ?
४. धेरैजसोले बाटो, पुल, अस्पताल बनाउनुस्, स्टेडियम रमाइलोको लागि हो, त्यो सरकारले बनाउने हो भन्नु भएको छ । यदि त्यसो हो भने तपाईं पनि त देशको नागरिक हो । धुर्मुस-सुन्तली जस्तै तपाईं किन बनाउनु हुन्न त ? किन यस्तो पवित्र कामको नेतृत्व लिनु हुन्न ?
५. यदि तपाईंको विचारमा बाटो, पुल, अस्पताल, शिक्षा आदि धेरै आवश्यक छ भने त्यो एक साधारण नागरिक धुर्मुस-सुन्तलीको जिम्मेवारी कसरी भयो ? त्यो झन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हैन ?
६. भ्रष्टचार भएको रकम किन त्यस्ता कार्यमा प्रयोग भएन भन्ने धारणा पनि देखेँ/सुनेँ । उनीहरुलाई मेरो प्रश्न छ कि धुर्मुस-सुन्तलीसँग सोध्ने हो या नेपाल सरकारसँग यो प्रश्न ? देशमा भ्रस्टाचार हुनु पनि धुर्मुस सुन्तलीको गल्ती झैं भन्नु भयो त ?
७. देश अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यस अवस्थामा कुन चाहिँ विषयले मन बुझाउने र म नेपाली भनेर गर्व गर्ने बाटो छ ? जब आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेशमा हुन्छौं अनि देशको क्रिकेटले जित्यो भनेर सुन्न देख्न र आफु भएको देशको नागरिकलाई मेरो देशले जित्यो भनेर भन्न पाउँदा जुन गर्व अनुभूति हुन्छ त्यो खेलकुदबाहेक अरु कुनै छैन । जितेर आउँदा विमानस्थलसम्म लाईन लागेर स्वागत गर्न जाने पनि त हामी नै हौं, हैन र ?
प्रश्नहरु त मनमा धेरै छन् तर योभन्दा धेरै लेख्न चाहिनँ । यदि कसैलाई अझै पनि यस पवित्र कार्यप्रति आपत्ति छ भने आउनुहोस् सार्वजनिक बहस गरौं । म तयार छु । हैन भने देशको खेलकुद क्षेत्रमा विकास हुनु भनेको पनि देशको नै विकास हो । त्यसैले विरोध जनाएर गैरजिम्मेवार नागारिक नबन्नु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु । कसैलाई सुझाव दिनुभन्दा पहिले आफुलाई नियाल्ने बानी गरौं ।
(यो लेखको सर्वाधिक लेखक रोजिन मगरमा रहेको छ )